PMP Certification - Antony 10 nahazo mari-pahaizana PMP - ITS Tech Tech
PMP Certification - Antony 10 hahazo mari-pankasitrahana PMP
Antony 10 hanaovana fanamarinana PMP
Ny fampiofanana momba ny fanofanana PMP dia ilaina
PMP sy ny fahafaha-manao karatra
Nino ny PMP Manana ny fahaiza-manaony
Zava-dehibe ny PMP Certification
Ny fanamarinana PMP dia mampiadana kokoa anao kokoa.
Miantsena amin'ny salary
Manamafy ny fanamarinana PMP ny asa fanitarana ny asa
Nampitomboina ho mpiandraikitra ny tontosaina
Ho olona iray avy amin'ny toerana iray amin'ny fihaonan'ireo manampahaizana malaza indrindra ianao
Ny mari-pankasitrahan'ny Project Management Professional (PMP) dia mari-pahaizana amin'ireo fanamarinana ankapobeny indrindra ho an'ny indostria. Fantatr'izy ireo daholo ny zava-drehetra ary manaporofo fa mahay, za-draharaha ary mahafeno fepetra amin'ny sehatry ny fitantanana ny governemanta. Amin'ny tanjona voafaritra iray hampiharana anao dia mila 4 taona ny mari-pahaizana (Bachelor na ny iray maneran-tany) ary ny latsa-dratsin'ny fitantanana ny governemanta tsy latsaky ny telo taona. Ankoatra ny 4500 ora ny fiara sy ny fandrindrana ny hetsika miaraka amin'ny ora 35 amin'ny Project Management Education, dia mila ihany koa ianao. Na inona na inona fepetra tsy ahazoana ny mari-pahaizana licence, azonao atao ny mampihatra izany.
Raha toa ka manana fanamafisana fanampiny ianao (sekoly ambaratonga faharoa na azo oharina maneran-tany) ary tsy manana latsaky ny dimy taona ny fihaonana fitantanana ny governemanta miaraka amin'ny ora 7500 momba ny fandrindrana sy ny fitantanana ny asa ary ny ora 35 momba ny fampiasana ny fitantanana ny fitantanana, dia afaka manome koa ianao.
Ny haben'ny PMP dia mahavariana. Io no iray amin'ireo fanamafisana 10 voalohany amin'ny planeta. Ny mari-pankasitrahana PMP dia heverina fa mifampiraharaha amin'ny orinasa. Fikambanana marobe no nanao ny fangatahan'ny PMs mba hanatanterahana ny fanamarinana PMP na fanamarinana. Amin'izay fotoana izay dia tsy voatery ho an'ny PM (Tetikasa Manager) ianao. Mety hametra ny fandrosoanao amin'ny fiantsoanao izany. Fanentanana iray hafa hanatanterahana ny PMP dia fanonerana. Araka ny voalazan'ny PMI's Salary Survey ny fahasivy, ireo mpanara-maso PMP dia manangom-bola ambonimbony kokoa (20% ambony sy ambony) noho ireo tsy manana mari-pankasitrahana.
Ny fananana mari-pankasitrahana dia hahatonga azy ireo ho tsotra kokoa hahitana ny fibodoana ho toy ny programa na tetikasa Project Manager. Ny habetsahan'ny PMP dia mahafinaritra. Izy io dia fanamarinana malaza sy malaza rehetra. Araka ny fijery isan-karazany, dia iray amin'ireo fehezan-teny 10 fototra eto amin'ny planeta.
Raha toa ny fangatahana mba hanaporofoana diso, dia manitatra ny mpanara-maso amin'ny fampiofanana ny fanamarinana PMP amin'ny ankapobeny dia miaiky fa manana fepetra mavesa-danja ho an'ny fiantohana ny fahombiazan'ny orinasa iray.
Ny Fanamorana ny Fitantanana Professional dia manerana izao tontolo izao. Misy orinasa marobe izay mitaky ny filoha izay niaina ny fampiofanana PMP. Ny ampahany amin'ireo fanoharana dia ny famolavolana fanampiana, ny fananganana volavolan-dalàna, ny orinasa sy solika, ny fampandrosoana, ny fitaterana ary ny engineering. Amin'ny fanamarinana PMP dia azonao atao ny mitarika ny fonosana.
Raha toa ka mitady asa ianao ho toy ny orinasa na mpanara-maso ny programa-na mbola eo am-piandohan'ny fotoam-pifandraisan'ny governemanta-ny mari-pahaizana momba ny fitantanana ny tetik'asa momba ny fitantanana ny tetikasa dia mahafa-po ho an'ny fampiofanana anao.
Ny fisokafana asa lehibe, ny fikambanana sy ny asa maro dia tsy maintsy mandidy ny fanamarinana PMP, ka noho ny tsy fahafaha-manaonao fa tsy PMP ianao no antoka, dia tsy afaka mandroso amin'ny ankapobeny ianao, na firy taona maro niainanao. Misy ny fandrosoana fanampiny ao anatin'ny fifandraisanao satria manampy azy amin'ny fanatanterahana ny fampiharana ny fampandrosoana, ka noho izany dia mahazo tombony koa ny fikambanana.
Araka ny voalazan'ny PMI Project Management Salary Survey, nahazo mpihazona 22 mahazatra kokoa noho ireo tsy mitovy taona aminy ao amin'ny 2015 ireo mpiasan'ny fanabeazana NINT-Edition (PMP).
Tokony hampisongadina ny loharanom-pahefana amin'ny PMP ianao amin'ny fotoana tsy ahafahanao miomana hiasa eo amin'ny sehatry ny fitantanana raharaham-barotra ho an'ny sisa tavela amin'ny fiainanao. Izany dia tsy maneho fotsiny ny fanoloran-tenanao sy ny fikiranao hitazona ny toeranao ao anatin'ilay fiarandalamby lavitr'ezaka fanampiny dia manampy anao hianatra ny fahaiza-manao iankinana manan-danja eo amin'ity sehatra ity.
Manampy anao amin'ny fanatsarana ny mpiandraikitra ny tontolon'ny fiaraha-miasa izany. Amin'ny alàlan'ny vanim-potoana, raha vao vita ny fanamarinana, dia maka fanazavana momba ireo fitaovana sy paikady ianao mba hahatonga ny raharaham-barotra ho mahavokatra. Izany dia manangana ny valim-pianaranao amin'ny farany. Hahazo tombontsoa hiara-hiasa miaraka amin'ny fitantanana ny rafitra miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny fitantanana ny orinasa hafa manerantany, izay mety hanatsara ny fahaizanao mahomby sy ny fanatsarana.
Amin'ny fanatanterahana ny fanamarinana PMP, ny anaranao dia ho tafiditra ao anatin'ny fanangonana lehibe sy manankarena indrindra amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana ny tetikasa.
Amin'ny fotoana tsy fantatra izay nantenainao hanao famolavolan-draharaha dia afaka manampy anao ny fanomezam-pahefana PMP. Amin'ny fananganana fidirana an-tsoratra izay mety ilainao mandritra ny taona maro, dia afaka manomboka amin'ny toerana midadasika ianao ary afaka mandoa vola mihoatra noho izay azonao atao. Ny mari-pankasitrahana PMP dia tsy ho ny zavatra tsy dia misy dikany no hataonao amin'ny asanao fa mbola hampandrosoana anao izany.
Ny fianarana PMP dia tena tsotra sy mahasoa indrindra NY. Izy io dia manabe ny fomba famoronana asa ary mamela ny mpikambana haka ny fianarana avy amin'ny fitsaboana amin'ny fiainana eto an-tany.